Izindaba - Liyini ikusasa lokukhethekile kwemishini ye-NC nokuthi ungakhetha kanjani?
E-China, i-CNC machining okukhethekile sekuyinto yonke kule minyaka eyishumi edlule, futhi abakhiqizi bamathuluzi we-CNC nabo baqhakaza yonke indawo. Umbundu wamabhizinisi we-NC machining uya ngokuya ngokuya ephansi, futhi ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokukhethekile kwemishini ye-NC kusetshenziswa kabanzi. Kuvalelisa inkathi yamabele nesibhamu.
Ngokwanda kwe-Intanethi eminyakeni yamuva nje, bayanda abantu abasha abajaha umsebenzi we-Intanethi, okuholela ekuswelekeni kwamathalente embonini yezemishini ye-NC. Ukutshalwa kochwepheshe bemishini ye-NC akulungile. Kubuye okufanayo emkhakheni wokucwaninga nokuthuthukiswa kwamathuluzi womshini we-CNC. Ubusha be-CNC machining technology technology abungehlukaniswa nemishini nobuchwepheshe. Ekuhlaziyweni kokugcina, ukungabikho kokuqondiswa kochwepheshe bemishini ye-CNC Kungenye yezizathu ezibalulekile ukuthi ubuchwepheshe bokulawulwa kwamanani asekhaya busele emuva kweJapan neJalimane.
Ubuchwepheshe bokulawulwa kwamanani, obaziwa nangokuthi ubuchwepheshe bokulawulwa kwamanani ekhompyutha, ubuchwepheshe bokubona ukulawulwa kohlelo lwedijithali ngekhompyutha. Imiyalo emincane eyenziwe ikhompyutha ngokusebenzisa ukucubungula umyalo idluliselwa kudivayisi ye-servo drive ukushayela imoto noma i-actuator ye-hydraulic ukushayela imishini yokusebenza. Ochwepheshe be-CNC yibo abasebenzi abaqedela lolu chungechunge lwemisebenzi futhi banamakhono amakhono obuchwepheshe kakhulu. Njengamanje, amathalente anjalo ngokuvamile ejwayelekile Angatholakala eziteshini ezimbili: eyodwa ngamathalenta aqeqeshwe yi-NC machining professional training school; enye ngamathalente obuchwepheshe ne-CNC akhula ngemuva kokuthi ama-opharetha afunde ubuchwepheshe be-CNC ngokuqeqeshwa emsebenzini kwamabhizinisi.
Ngenkathi yokwenziwa ngcono komkhiqizo, ikhwalithi nokunemba kwemikhiqizo kuya ngokuya kuqina, futhi izidingo ze-CNC machining specialty nazo ziphakeme kakhulu. Ukushoda kwamathalente ku-CNC machining okukhethekile kuholele ekuswelekeni kwamathalente emakethe yokhololo oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngokuzayo, kuzoba ngesinye sezigaba zamathalente ukuze amabhizinisi akwazi ukusinda.